Dadka: R. Kelly taageerayaasha way ka xanaaqeen ka dib markii ay bixiyeen 100 dollar sanadaha 28 ee xafladaha! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: R. Kelly Taageerayaasha way careysan yihiin ka dib markii ay bixiyeen 100 dollar oo loogu talagalay wareegyada 28 ee xafladaha!
Ixtiraamka ayaa kudhacay R. Kelly nolosha dhabta ah! Inta uu ku jiro caws iyo
in uu ahaa inuu ka soo muuqdo magaalada magaalada Springfield ee gobolka Illinois
riwaayad, ninka ayaa u soo degay in uu sameeyo inta lagu jiro ... ilbiriqsi 28! ah
Kooxda Wanda ayaa sharraxaysa dhacdadan soo socota!
Dhexdhexaadinta muranka sababtoo ah eedeymo badan oo ku saabsan xadgudub galmo oo uu isagu yahay mawduucalaakiin sidoo kale sababtoo ah dhibaatooyinka uu la kulmayoQawaaniinta isqaba ee uqaabilsan xaaskiisa hore, R Kelly kama tagin hudheelka! Wuxuu ku jiraa mouise gaar ahaan cawska, isagoo aan wax bandhig ah dhowr bilood ah. Waxaan xusuusneynaa in xabsiga laga sii daayay dhowr toddobaad ka hor, damiintiisa ayaa waxaa bixiyay duco dahabi ah.
Sidoo kale, dib-u-dhiska caafimaadka maaliyadeed iyo ka dib marar badan ayaa diidday fursad ay ku qabatoSabtidii hore, 6, turjumaan "Waxaan Aaminsanahay Inaan Ka Fududeyn Karo" ayaa ka soo muuqday Dirty South Lounge, mid ka mid ah naadiyada magaalada ee Springfield. Dhowr saacadood ka hor, sida laga soo xigtay warbixinnada wararka u dhaw, muusigga ayaa ku dhawaaqi lahaa inuu yimaado isagoo weydiinaya warbaahinta " si aad u noqoto mid aad u wanaagsan Isaga oo leh fiidiyoow. Ka dibna wuxuu muujiyay baahidiisii ​​uu ku heli lahaa lacag.
Wanda Peeps, waa agagaarka 1h30 in R. Kelly ayaa yimid naadiga. Si aad u hesho bandhigiisa, taageerayaashu waa inay bixiyaan 100 dollars (58 277 Francs CFA) ka dibna 50 dollars (29 138 Francs CFA) markii uu soo muuqday. Soddon daqiiqo oo wanaagsan, wiilku wuxuu lahaa madadaalo qaadasho, isdheelsiin, qoob-ka-cayaar iyo sigaar cabbista sigaarka. Cayaartu waxay markaa rabtay inay marxaladda mariso si ay u heesaan jumlad oo markiiba markale hoos u dhacdo. Sidaa darteed waxay ahaan doontaa wadar ahaan tirooyinka 28 ka hor inta boqolkii qof ee u soo guuray qalqal. Xasillooni la'aanta!
Dhab ahaantii, R. Kelly ayaa sidoo kale soo jeestay sidoo kale hadda?
Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha ma u muuqdaan inay ku faraxsan yihiin.
"Taasi waa waxa uu hore u sheegay dhamaan bandhigiisa"
"Miyuu ku haboon yahay qaab ciyaareedkiisa sariirta iyadoo qaab ciyaareedkiisa ciyaareed? Taasi waa heshiiskii maxkamadda? "
"Waa ciyaaryahan xirfadle ah, ma ahan inuu mar kale sameeyo. Ugu xumaa waa inaynu wada ognahay in uu yahay macallin ku dhawaad ​​sanadka 20 "
"Halkaas ayaan ahaa, haa, wax yar ayay igu dhaceen"
Eh haa ... R. Kelly! Maxaad u malaynaysaa in uu Wanda Dadkeedii Wanda soo bandhigay?
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.jewanda-magazine.com/2019/04/people-les-fans-de-r-kelly-furieux-apres-avoir-paye-100-dollars-pour-28-secondes-de-concert/
Young, Celine Dion "ma jirto kalsooni" iyada